Konke odinga ukukwazi ngeqhwa elomile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa ngeqhwa elomile. I-carbon dioxide isesimweni esiqinile, iqandisiwe ekucindezelekeni komkhathi ekushiseni kwe -78,5 ° C. Isici esenza ukuthi ikhetheke kakhulu ukuthi uma "incibilika" iya ngqo esimweni segesi ngaphandle kokushiya noma yiluphi uhlobo lomswakama. Ngakho-ke yaziwa njengeqhwa elomile.
Ngabe ufuna ukwazi izakhiwo zayo nokusetshenziswa kwayo okuhlukile?
1 Izici nezakhiwo
2 Izinzuzo zeqhwa elomile ngaphezulu kwamanzi
3 Umphumela ohlukile
4 Yenzelwe ini?
5 Ungenza kanjani iqhwa elomile ekhaya
Iqhwa elomile litholakala ngegesi ekhiqizwa njengomphumela wezinye izinqubo zezimboni. Iqhwa elomile likhiqizwa ezitshalweni zomlilo nasekuphenduleni ukuvutshelwa. Njengoba kushiwo ngaphambili, kumayelana ne-carbon dioxide efriziwe. Le gesi ekushiseni okuphansi kakhulu iyakwazi ukuba sesimweni esiqinile. Uma ifakwe ngaphansi ayikhiqizi noma yiluphi uhlobo lwamanzi, amanzi noma umswakama.
Lapho le gesi incishiswa emoyeni ogcwele i-CO2, ijwayele ukunciphisa inani lomswakama emvelweni. Lokhu kwenza le gesi ibe wusizo olukhulu ukuyisebenzisa uma uzama ukugcina imikhiqizo ezwelayo kumswakama.
Ikhilogremu ngalinye leqhwa elomile likhiqiza amafrigi ayi-136 wamandla. Igesi isezingeni lokushisa elingu -78,5 ° C futhi ikhiqiza amanye amafriji ayi-16, okwenza kube lula ukuthola inani lama-frigories ayi-152 ngekhilogremu ngalinye leqhwa elomile.
Izinzuzo zeqhwa elomile ngaphezulu kwamanzi
Ngesisindo esilinganayo, iqhwa elomile liyakwazi ukupholisa u-170% ngaphezu kweqhwa elijwayelekile. Lokhu kuthakazelisa kakhulu endaweni yasekhishini, ngoba iyakwazi ukupholisa imikhiqizo ngokushesha. Njengoba ukuminyana kweqhwa elomile kukhulu kuno-1,5 Kg / dm3 futhi ukuminyana kweqhwa lamanzi kulingana no-0,95 Kg / dm3, kuvela ukuthi umthamo olinganayo weqhwa osetshenzisiwe, iqhwa elomile linamandla okupholisa alingana no-270% uma kuqhathaniswa neqhwa lendabuko. Lokhu kuthonya ngendlela ebucayi kulezo zindawo lapho umthamo weqhwa ohlala kuwo ungumsuka, iqhwa elomile kuyisinqumo esingcono kakhulu sokusebenzisa lesi sikhala.
Iqhwa elomile alinawo kuphela izakhiwo ezikhethekile njengalezo ezibalulwe ngenhla, kodwa futhi kubhekwa njenge-bacteriostatic agent kanye ne-fungistatic agent. Lapho i-sublimation ivela, kukhiqizwa umoya okugxila kwawo kwe-CO2 kuphakeme kakhulu kangangokuba kwenziwa isenzo semithi elwa namagciwane. Ngakho-ke, igesi enhle kakhulu ukunciphisa ukukhula kwamagciwane, isikhunta kanye nemvubelo futhi sakhe indawo ehlanzeke ngokuphelele.
Lo gesi uyakwazi ukususa umoya-mpilo okhona emoyeni, ngaphakathi kweziqukathi neziqukathi, okufaka isandla ekwenzeni ngcono ikhwalithi yezinto eziphilayo zezindawo lapho imikhiqizo ethile idinga ukugcinwa nokugcinwa khona.
Iqhwa elomile lisetshenziselwa ukwelashwa nezenzo ezahlukahlukene namuhla. Phakathi kokusebenzisa kwayo sithola:
Ucwaningo lwezokwelapha nolwezesayensi: Ukugcina izitho zokufakelwa noma zezifundo, kunconywa kakhulu ukusebenzisa iqhwa elomile, ngoba amandla alo amakhulu esiqandisini ayigcina isesimweni esihle. Iphinde isetshenziswe ocwaningweni lwesayensi ukugcina imikhiqizo yezinto eziphilayo emazingeni okushisa aphansi, ukusabela okupholile okuphazamisayo namaseli weqhwa ashesha kakhulu, izicubu, amabhaktheriya namagciwane.
Ekubuyiseleni: Ekuphekweni okuphezulu, kusetshenziswa iqhwa elomile ukuvula umhlaba wamathuba amaningi okwenza izitsha ezingafani ngokuphelele zekhwalithi nentengo ephezulu. Ngenxa yezici zaleli qhwa, imiphumela ethakazelisa kakhulu futhi ekhangayo ingatholwa iklayenti. Abapheki abayizicucu kakhulu bangeza kabanzi kusuka ezethulweni zoqobo kuye ezinkungwini ezinamakha, ukuminywa okubandayo, ukwakheka nokuqhathanisa kuma-mousses nama-foie gras, ama-slushies, ama-ayisikhilimu, amagwebu kanye nokhilimu, noma benze imiphumela ehlaba umxhwele ngentuthu kuma-cocktails ahlanganisiwe nacacisiwe.
Umkhakha: Embonini le nto isetshenziselwa ukwenza lula ukuhlangana nokulungiswa kwezingcezu ngokusikwa okubandayo. Ibuye isetshenziselwe ukugaya i-cryogenic kanye nokuphazamiseka kwepulasitiki kanye ne-rubbers.
Ukudla kwezolimo: Kulo mkhakha usetshenziselwa ukupholisa inhlama yabaxovuli ngesikhathi sokugaya nokuxuba inyama, ukuqandisa okujulile kokudla kanye nomthethonqubo wokushisa. Ukusetshenziswa kweqhwa elomile ekuthuthweni kuqinisekisa ukugcinwa kochungechunge olubandayo.
Ukusatshalaliswa okukhulu: Isetshenziswa lapho kudingeka ukulungiswa okuphuthumayo uma kwenzeka imishini ethile yasesiqandisini inqanyuliwe nokugcina uchungechunge olubandayo.
Ukuhlanzwa kwe-Cryogenic: izinhlayiya zeqhwa ezomile zingajovwa ngomfutho ophakeme ukuhlanza zonke lezo zindawo ezihlangabezane nohlobo oluthile lokuguqulwa ngamanzi, njengakwezinye ukufaka kagesi.
Ezolimo: Isetshenziswa ngemiphumela emihle yokulawula izinambuzane ezifana namagundane, izinsumpa nezinambuzane.
Amakhompyutha kanye ne-elekthronikhi: Kuyindlela enhle kakhulu ukupholisa amadivayisi kagesi nokwenza ngcono ukusebenza kwawo, kusheshiswe ukudluliswa kwezimpawu zikagesi.
Ukwakhiwa: Isetshenziselwa ukuqandisa phansi namapayipi ukudala ipulagi ngaphambi kokulungiswa.
Ungenza kanjani iqhwa elomile ekhaya
Uma ufuna ukubona imiphumela ekhethekile yeqhwa elomile ekhaya, kufanele ube nezinto ezilandelayo:
I-CO2 - isikhutha (singayithola kusicimi mlilo)
Isikhwama noma indwangu
I-adaptha yamasondo amabhayisekili afuthayo
Kufanele ubeke isikhwama sendwangu (kubalulekile ukuthi inezimbotshana ukuze ivumele ukuphuma kancane kwegesi) ezungeze umbhobho wesicisha-mlilo noma ibhodlela le-CO2 esisisebenzisayo. Lapho sesibeke isikhwama sendwangu, siyeke ukukhishwa kwegesi ukuze ingene esikhwameni. Lapho igesi ikhishwa, ingcindezi engaphakathi kuyo izoyiqandisa ngokuzenzekelayo futhi sizoba neqhwa elomile. Singasebenzisa leli qhwa elomile ukwenza umthelela ohlaba umxhwele kuma-dessert neziphuzo zethu, ngoba lapho kuthintana namanzi kuzothuthukisa futhi kukhiqize lowomphunga omhlophe omangazayo.
Njengoba ukwazi ukubona, iqhwa elomile lisetshenziswa kabanzi emikhakheni eminingi futhi imiphumela yalo ayipheli ukusimangaza. Manje njengoba usuyazi izakhiwo zayo, yiba nesibindi sokuyisebenzisa ekhaya futhi umangaze abangane bakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Iqhwa elomile
UJorge Rivera kusho
Ekulungisweni kweqhwa elomile ekhaya, bakhuluma nge-adaptha yokufaka amasondo ebhayisikili.Lokhu kusetshenziselwa nini ukulungiselela iqhwa elomile?
Phendula uJorge Rivera
Konke odinga ukukwazi ngeqhwa